Owesifazane odlwengulwe ekhulelwe ulume 'induku' yomsolwa | News24
Owesifazane odlwengulwe ekhulelwe ulume 'induku' yomsolwa
White River – Owesifazane onezinyanga ezintathu ekhulelwe udlwengulelwe phambi kwendodakazi yakhe eneminyaka emihlanu ubudala, ngumuntu ongaziwa ngaphambi kokuba amlume kanzima "induku" ku-Spionkop Road ngaphandle kwaseWhite River, kusho amaphoyisa aseMpumalanga ngoLwesibili.
Okhulumela amaphoyisa uBrigadier Leonard Hlathi uthi isigameko senzeke epulazini ngoMsombuluko ntambama.
“Owesifazane, oneminyaka eko-30 ubudala, ubelinde izimoto ezizomhambisa emtholampilo yena kanye nengane yakhe ngesikhathi kuqhamuka eyohlobo lwe-Toyota Tazz ebinabantu besilisa ababili phakathi abacele ukumgibelisa,” kusho uHlathi.
“Ukhonjwe ngesibhamu besahamba emgwaqeni, wayalelwa ukuba angalinge amemeze. Laba besilisa bahambe naye lona wesifazane [kanye nengane] baya ehlathini.
OLUNYE UDABA: 'Kusezandleni zikaZuma ukuphuma ngesizotha noma ehlehla nyova'
“Omunye wabo udlwengule owesifazane phambi kwengane yakhe. Eminye imininingwane ithi lona wesifazane ukwazile ukuluma owesilisa isitho sakhe sangasese kulesi sigameko.”
Bobabili abasolwa babalekile ngemuva kwesigameko, kanti ingane ayilinyazwanga, kusho uHlathi.
"Amaphoyisa acela izikhungo zezempilo ukuba zixhumane nawo uma kunowesilisa ofika ezofuna usizo elimele isitho sangasese," kusho uHlathi.
Kuvulwe icala lokudlwengula ukuze kuphenywe kodwa bekungakaboshwa muntu.